Imboni Tape Series Factory - China imbobo Tape Series Abenzi, abahlinzeki
I-tape tape, ebizwa nangokuthi i-duck tape, i-tape- noma i-scrim-backed tape-sensitive tape, evame ukufakwa nge-polyethylene. Kunezinhlobonhlobo zokwakhiwa kusetshenziswa ukusekelwa okuhlukile nezinamathiselo, futhi igama elithi 'duct tape' livame ukusetshenziselwa ukubhekisa kuzo zonke izinhlobo zamateyipu wendwangu ehlukene ngezinhloso ezahlukahlukene.
Indwangu yethephu ifakwe i-high-viscosity rubber noma i-hot melt glue, inamandla amakhulu wokuxebuka, amandla we-tensile, ukumelana kwamafutha, ukumelana nokuguga, ukumelana namazinga okushisa, ukuvimbela amanzi, nokumelana nokugqwala. Iteyipu yokunamathela ephezulu enokunamathela okukhulu kakhulu.
Indwangu yeteyipu isetshenziselwa ikakhulukazi ukubekwa uphawu kwamakhathoni, ukuthungwa kukakhaphethi, ukubopha okusindayo, ukupakisha okungangeni manzi, njll. Okwamanje, isetshenziswa kaningi embonini yezimoto, embonini yamaphepha, nasembonini ye-electromechanical. Isetshenziswa ezindaweni ezinjengamakamelo ezimoto, i-chassis, amakhabethe, njll., Lapho izindlela ezingangeni manzi zingcono. Ukucubungula okulula ukufa.
I-tape tape, ebizwa nangokuthi i-duck tape, i-tape- noma i-scrim-backed tape-sensitive tape, evame ukufakwa nge-polyethylene. Kunezinhlobonhlobo zokwakhiwa kusetshenziswa ukusekelwa okuhlukile nezinamathiselo, futhi igama elithi 'duct tape' livame ukusetshenziselwa ukubhekisa kuzo zonke izinhlobo zamateyipu wendwangu ehlukene ngezinhloso ezahlukahlukene. I-tape tape ivame ukudideka ne-gaffer tape (eyenzelwe ukuthi ingabonakali futhi isuswe ngokuhlanzekile, ngokungafani ne-tape tape). Okunye ukwehluka kwe-foil engamelana nokushisa (hhayi indwangu) itheyipu yomsakazo ewusizo lokufaka uphawu lokushisa nokupholisa amapayipi, akhiqizwayo ngoba itheyiphu ejwayelekile yomgwaqo iyahluleka ngokushesha lapho isetshenziswa emiphakathini yokushisa. I-tape tape ngokuvamile i-silvery grey, kodwa futhi iyatholakala kweminye imibala ngisho nakwimidwebo ephrintiwe.
Ngesikhathi seMpi Yesibili Yomhlaba, iRevolite (ngaleso sikhathi eyabe ihlukaniswa nguJohnson & Johnson) yathuthukisa iteyipu yokunamathisela eyenziwe ngcina enamathela enjoloba isetshenziswa ekusekelweni kwendwangu yedada okuqinile. Le theipi yamelana namanzi futhi yasetshenziswa njengetheyiphu yokuvala uphawu kwamanye amacala ezinhlamvu phakathi naleso sikhathi.
“Iteyipu yedada” ibhalwe ku-Oxford English Dictionary ukuthi ibisetshenziswa kusukela ngo-1899; ”i-tape tape” (echazwa ngokuthi “mhlawumbe ukushintshwa kwetape tape yangaphambili”) kusukela ngo-1965.